Fanakorontanana sy fanimbana :: Olona dimy amby efapolo voasambotra tany Antsirabe • AoRaha
Vitavitan’ny fihemorana tamin’ny fampiharana ny fepetra fampihibohana tamin’ny ampahany tany Antsirabe fotsiny ny lesoka amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra niteraka savorovoro sy famotehana fananana iombonana tany antoerana, afak’omaly alina. Tsy afa-bela kosa ireo noahiana ho nandray anjara tamin’ny fanakorontanana sy fanimban-javatra satria nahatratra dimy amby efapolo ny isan’ireo olona voasambotry ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana, hatramin’ny omaly.
Voatondro ho anisan’ireo nitarika sy nanao ny fanakorontanana ireo olona nosamborina tsy latsaky ny dimy amby efapolo ireo. Misafidy ny tsy hilaza ny momba ny toerana hitazonana azy ireo sy ny amin’ny tohin’ny fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana ho fisorohana ny mety hisian’ny savorovoro hafa. Tsy maintsy hatolotra ny Fitsarana anefa ny valin’ny famotorana rehetra, araka ny fantatra.
Etsy an-daniny, dia nohamafisina ny fiambenana sy ny fanaraha-maso ny tanànan’Antsirabe manontolo. Nampiana isa ny mpitandro ny filaminana any an-toerana. Tsy nisy kosa ny trangana hafa niseho sy nampiahiahy hatramin’ny omaly tolakandro.
« Manoloana ny korontana sy ny savorovoro nitranga teny amin’ny CTC-19, teny Vatofotsy, tamin’ny alin’ny alakamisy 6 mey teo, dia miato ny fampiharana ny fihibohana manomboka amin’ny 2 ora tolakandro manerana an’ny faritra Vakinankatra », hoy ny ampahan’ny fanambaràna novakian’ny governoran’ny faritra Vakinankaratra, Rakotovao Vyvato, izay notronin’ireo mpiara-miasa akaiky aminy, omaly.
Hafahafa tamin’ny mponina sasany tokoa io fepetra nampitroatra tany Antsirabe io satria na nomen’ny Fanjakana alalana amin’ny fandraisana fepetra sahaza amin’ny ady amin’ny Covid-19 aza ireo faritra ahitana marary betsaka dia isan’ny fanapahan-kevitra be mpanakiana ny momba ny fihibohana. Isaky ny faran’ny herinandro (sabotsy sy alahady) mantsy, ohatra, no mihiboka tanteraka ny eto Analamanga nefa eto no mbola foiben’ny valanaretina, amin’izao fotoana izao.
Efa raraka ny rano vao niantso ny mponin’Antsirabe ho tony ny governoran’i Vakinankaratra, omaly, na dia niaro tena mafy aza izy raha nilaza fa nisy antony ny nandraisana an’ ilay fepetra fihibohana tapak’ andro izay nampikorontana.
Vy tsy mikitrana irery Nomelohiny kosa ny fihetsik’ireo andian’olona nitora-bato ka nahavaky ny fitaratra tao amin’ny CTC-19 tao Vatofotsy sy ny fikasana hamotika ny oniversite eo an-dalam-panamboarana ao Antsirabe. « Tsy ny fanjakana no fahavalontsika fa ny valanaretina ka tokony tsy hisy ny fanimbana ny fananam-bahoaka tahaka ireny », hoy izy raha naneho hevitra tao amin’ ny haino aman-jerim-pirenena.
Tsy tsapa tamin’ny fanambarany mihitsy, araka izany, ny fisian’ny fandraisana fanapahankevitra tsy am-piheverana ary « tsy nikorontana ny olona raha tsy nisy zavatra naharary azy”, hoy ny solontenana fikambanana iray azo tamin’ny antso an-tariby tao Antsirabe, omaly . Re tsilian-tsofina ihany koa ny tsy fankasitrahan’ny ankamaroan’ireo olona akaiky ny Filoha an’iny fanapahan-kevitry ny governoran’i Vakinankaratra momba ny fihibohana amin’ny ampahany ka nampisavorovoro iny.
Vao tamin’ny talata lasa teo no nanokafan’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry ny CTC-19 tao Vatofotsy. Mamotika ny endriky ny mpitondra izao tsy fifehezana ny fitantanana ny faritra sy ny mponina izao, eny fa dia nohitsian’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Andriatongarivo Lalatiana aza ny fisian’ny ambadika politika tamin’ity tranga tao Antsirabe ity.
« Andro vitsy nialoha izao zava-nitranga izao no nahenoana ny fanomanana andian’olona avy amina antoko iray nampirisika andian-jatovo nanao an’ireo fanimban-javatra. Aoka isika ho tony ary aoka ihany koa mba hisy ny fanadihadiana lalina mikasika ny raharaha », hoy ity minisitra mpitondra tenin’ny governemanta sady mpiahy manokana ny faritra Vakinankaratra ity tao anatin’ny fandaharany isan-kerinandro « Tsy tompon-trano mihono », omaly.
Efa ireo nirosoana ireo aloha ny fisamborana olona tsy latsaky ny dimy amby efapolo tany Antsirabe ary asa raha hisy koa ny famotorana amin’ny fahaizamitantana mba tsy hiverenan’ny tranga toy ireny intsony.
Fampandrosoana isam-paritra :: Amafisin’ny Filoha ny fametrahana ny paikady maharitra any Atsimo